सौता बेर्होन तयार छु तर घर फर्किदिनुस् भन्दै एउटी श्रीमतीले श्रीमानलाई गरिन् आग्रह, यस्तोसम्म गरेका रहेछन् श्रीमानले, रुदैं आईन् मिडियामा (भिडियोसहित) - Prateek Nepal
काठमाण्डौ । ईश्वरी पोख्रेल । तीन सन्तानकी आमा । जस्को एक छोरा दुई छोरी छन् । घर पाँचथर । तर काठमाणडौ बस्दै आएको लामो समय भएको रहेछ । श्रीमानले छोडेका रहेछन् । उनका श्रीमानले एक पटक हैन पटक पटक छोड्दै र भेटिंदै अनि अब छोड्दिन भन्दै बाचा कसम खाँदै सन्तान जन्माउँदै र फेरी छोड्दै गरेका रहेछन् । यस्तो श्रीमानलाई पनि ईश्वरीले अहिलेसम्म सम्मान र प्रेम गरेको बताउँछिन् ।
ईश्वरीको भनाई अुनसार उनका श्रीमानले अर्कै केटी लिएर केटीसंगै काठमाण्डौमा नै फ्ल्याट लिएर बसेका रहेछन् । कतिसम्म भएको रहेछ भने तीन सन्तान जन्मिसकेपछि पनि श्रीमान फेरी पहिलाको जस्तै गरी घरपरिवार र छोराछोरीदेखि सम्पर्क बिहीन भए । लामो समयसम्म सम्पर्क बिहीन भएपछि ईश्वरीले श्रीमानको खोजी गर्न सकिनछिन् । तर एकदिन माक्स किन्नेबेलामा भने कान्छि छोरीले बाबालाई चिनेर घरमा ल्याएको उनले बताईन् । ईश्वरीको यो कुरा सुन्दा जो कोहीलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो साँचो हो ।
घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुँदाहँदै अर्कै केटीसंग लागेर आफ्ना सबै जिम्मेवारी बिर्सिएका ईश्वरी श्रीमानको यस्तो बानीले आजित भएकी छिन् । तरपनि उनले छोराछोरीलाई बाबुको माया र केयरको आवश्यकता परेको हुनाले बरु आफुले सौता बेर्होन तयार रहेको तर घर सम्झिएर फर्कन उनले श्रीमानलाई आग्रह गरेकी छिन् । कुनै पनि श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान अरुसंग बोलेको त रुचाउँदैनन् भने सौता बेर्होने कुरा त मुटुमा ढुंगा राखेर बोलिने कुरा हो । ईश्वरीले पनि त्यही बोलेकी हुन् । भिडियोसहित
प्रवासी कामदारका लागी अत्यन्तै खुशीको खबर !! साउदीमा नयाँ नियम लागु ! [ सक्दो शेयर गरौँ ]
बौद्ध इन्टरनेशनल स्कूल जोरपाटीले फि नति’रेको भन्दै बच्चा निकालेपछि अभिभावकले गरे ‘तो’ड’फो’ड [भिडि योसहित]
October 4, 2020 October 4, 2020 Ramash kunwar